Apple waxay soo bandhigi doontaa dheelitirkeeda seddexdii biloodba mar Abriil 25 | Wararka IPhone
Sida aan ka arki karno gudaha bogga maalgashadayaasha ka Apple, shirkadda ku salaysan Cupertino ayaa bixin doonta xogta maaliyadeed saddexda bilood ee hore ee 2016. Waxay ku sameyn doonaan shir ay si toos ah u baahin doonaan (in kastoo aanan u maleyneynin inaan arki karno) xiga Abriil 25 14: 17 pm Pacific / 23: XNUMX pm Bariga (XNUMX: XNUMX pm ee gacanka Spain) kaas oo Apple CEO Tim Cook iyo CFO Luca Maestri ay ku hadli doonaan.
Shirkii ugu dambeeyay ee maaliyadeed ee bishii Janaayo, Tim Cook wuxuu sheegay in 2016 la filayo inuu noqdo sanadka ugu horeeya ee Iibinta iPhone-ka ayaa hoos u dhici doonta tan iyo markii la bilaabay 2007. Tani waa wax shirkadaha kale ay sidoo kale filayaan, gaar ahaan markay timaado taleefannada casriga ah ee heerka sare. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira tartan badan oo inbadan iyo shirkado badan ayaa bilaabaya aalado wanaagsan oo qiimo sare leh. Weli waa la arki doonaa haddii hoos u dhacan iibku uu horeyba uga muuqdo Abriil, wax laga yaabo in lala yaabo haddii aan tixgelinno in iPhone 6s ay sidoo kale jabisay diiwaanka iibka toddobaadyadii ugu horreeyay nolosha.
Miisaaniyadda soo socota ee Apple ayaa ka tarjumeysa iibka iPhone-ka oo hooseeya
Waxa kale oo xiiso leh in la arko inta ay noo sheegaan. Tan waxaan ula jeedaa, miyay noo sheegi doonaan isla markiiba imisa Apple Watches ah oo la iibiyey ilaa maanta mise waxay sii wadi doonaan inay kaga tagaan saacadooda qaybta "dadka kale"? Calaamadda taas iibinta tufaaxa tufaaxa Ma fiicneyn, waxay noqon laheyd haddii ay na siiyaan xog ku saabsan inta jiilka afraad ee Apple TV-yada la iibiyey. Sanduuqa cusub ee loo yaqaan 'set-top box' ee Apple ayaa la iibiyay bishii Oktoobar, halka Apple Watch uu isna sidaas oo kale sameeyay bishii Abriil 2015. Haddii aad keento xog tii ugu horreysay oo aanad siin tii labaad, waxbaa khaldamay saacadda. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan iska nadiifin doonaa wixii shaki ah oo aan ka yarayn bil.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay soo bandhigi doontaa isku dheelitirkeeda seddexdii biloodba mar Abriil 25